Yimvelaphi yangempela yeLizwi "iPiknikishi"?
Ngaba iLizwi elithi "iPiknikishi" Liyingozi?
Iimvumi eziNtsholongwane Iimangalo ezingekho ngokuchanekileyo ukuba iXesha linemvelaphi elungileyo
Umyalezo onentsholongwane ojikelezayo ukususela ngo-1999 ugxininisa ukuba igama elithi "ipiknikishi" lalivela kwiindawo zasemakhaya zentsapho apho abantu abamhlophe babetha i-Afrika-baseMelika. Olu hlobo lwe-etymology luyi-rumor ye-intanethi, ephosakeleyo.
Nantsi itekisi ye-imeyile yesampula ukususela ngo-Ephreli 19, 1999:
Isihloko: FW: "PICNIC"
Le imeyile iza kuwe njengesibhengezo senkonzo karhulumente kunye nolwazi ngolu hlobo lweNkcukacha ebalulekileyo yeMbali yeMnyama. Le ngcaciso i-African American Archives kwi-Smithsonian Institute.
Nangona ingafundiswa kumaziko okufunda kunye neencwadi zaseMerika, yaziwa kwiinkalo ezininzi zobungcali bembali kunye neencwadi ezivela kwimvelaphi yegama elithi "ipikiniki" evela kwii-African-Americans. ... Yilapho abantu "babeza" umntu omnyama ukuba lynch aze enze le ntlanganiso yintsapho. Kuya kuba nomculo kunye ne "picnic". ("UNic" yayiyigama elihlekisayo kumntu omnyama.) Imifanekiso yale nto iboniswe kwi-movie "Rosewood." Ukuze sibe nobuhlanga obukhethekileyo, kufuneka sikhethe ukusebenzisa igama elithi "i-barbecue" okanye "ukuphuma" esikhundleni se "picnic".
Nceda uthumele le imeyile kubo bonke osapho kunye nabahlobo kwaye masifundise abantu bethu.
Umthombo weLizwi Lwenyaniso
Unokufumana okungaphezulu malunga ne-etymology yegama elithi "picnic" ngokubonisana naluphi na isichazamazwi. UMerriam-Webster kwi-intanethi unikeza inkcazelo elandelayo: "Umvelaphi kunye ne-Etymology yepikiniki: isiJamani okanye isiFrentshi; isiJalimane uPickknick , esivela kwi- pique-nique yesiFrentshi ."
Thatha iLizwi lethu, umagazini we-intanethi ochaza imvelaphi yamagama, unikeza iinkcukacha ezingakumbi:
"I-Picnic ibolekwe kwi- piquenique yesiFrentshi, igama elibonakala livela ngasekupheleni kwekhulu le-17. Akucaci ukuba livela phi, kodwa enye inkolelo kukuba isekelwe kwisenzo sesenzi 'khetha, peck' ( umthombo wekhefu lwesiNgesi), kunye ne-rhyming nique mhlawumbi ifakwe kwisiqingatha sokukhumbula ukuhlaziywa kwama- nique '. Ekuqaleni igama lichaze uhlobo lweqela apho wonke umntu azisa khona ukutya: imbono 'yesidlo sangaphandle' ayizange ivele ifike ngekhulu le-19. "
ILizwi lesiFrentshi lama-17 leminyaka
Ezinye iimithombo ziyavuma: "Iipiknikhi zaqala ubomi njengelizwi lesiFrentshi lekhulu le-17 leminyaka: kwakungasondelanga nokuba ngumbutho waseMelika," i-website ethi Snopes ithi.
"I-1692 edition ye- Origines de la Langue Françoise de Ménage ichaza 'i-piquenique' njengemvelaphi yamuva kwaye ibonakalisa ukubonakala kokuqala kwegama eliprintiweyo."
Igama liye laqulunqwa ngokujoyina ifomu eqhelekileyo yesenzi esithi "piquer" (esithetha "ukukhetha" okanye "peck") nge "nique," mhlawumbi igama lesiJalimane elisithetha "into engento yanto" okanye nje isilunga sesingeniso esingenanto ukulingana nesahlulo sokuqala sekota, ithi iwebhusayithi.
Ipikiniki yinto enokuthula kunye neyokuphumla, "ukuhamba okanye ukuphuma apho abathathi-nxaxheba bephethe ukutya nabo kunye nesabelo esidliwayo," kuchaza i-dictionary.com, evumelana neminye imithombo malunga ne-etymology yekota kwaye ibonisa imephu ewusizo yamazwe apho igama livela khona. Ukuqhayisa abantu base-Afrika baseMelika ngabamhlophe kungenakukhunjulwa, kwaye ukuzama ukunyamezela kumane kunceda ukunciphisa ubunzulu bembali yayo.
Ngaba uNeil Armstrong uthi "Inhlanhla, Mnu Gorsky!" ngeNyanga?
Iingcamango Ngokubhekiselele Ngubani Owabulala Indodakazi kaDiana Diana
Iinqununu eziphezulu zeKrisimesi ezi-5 eziphambili
Ngaba i-Poinsettias "Inetyhefu" kwizinja, iiKati kunye nezingane?
Ingaba uMama Uqalekisa I-Titanic?
Umfundisi uJeremiya Steepek
U-Roswell: Ukuzalwa Kwamangqina
Umnikeli, uDonder, okanye u-Dunder?
Kutheni Senza Ukhohlisi-okanye-Siphatha NgeHalloween?
Iintetho eziMnandi zithi "'Sasihamba ngobusuku ngaphambi kweKrisimesi'
U-Black Black Pershing kunye namaGandamane aseMuslim
I-Great London Smog ka-1952
IJografi kunye neMbali yeYemen
I-Geology, History, kunye ne-Wildlife ye-Appalachian Mountain Habitat
Yazi Aba Balulekileyo Abafazi KwiMbali Yamnyama
I-Athena, umfazikazi ongumGrike woBulumko kunye neMfazwe
Ulwaphulo olusetyenziswayo ukubulala ama-Shrubs kunye neMithi
Iingelosi zeBhayibhile: Ingelosi yeNkosi iphakamisa uEliya
Iincinci zengcali (i-rhetoric)
Inkcazo ye-Globalization kwi-Sociology
Iifoto Imifanekiso: Iikati ezincinci
Iigqabi eziphambili zeMitshatweni
Zingakanani iindleko zeCal Golf Clubs?
Inkqubo ye-MBA yamahhala
Yongeza i-Texture kwiintlobo zeMifanekiso
Abanqobileyo Abanelisileyo - Baphi ngoku?
Iingoma eziphezulu zeBilly Joel zee-80s
Uthintelo lweTeknoloji yeRadio
Uhambo lweHero - Uvuko lubuyele kunye no-Elixir
Ingaba I-Mace Ishicilelwe Ngaba Unomhla Wokuphela? Ewe!